Warshadaha safarka Mareykanka waa inay wax ka qabtaan nusqaannada aaminaadda ee daahfurnaanta qiimaha, nabadgelyada COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Warshadaha safarka Mareykanka waa inay wax ka qabtaan nusqaannada aaminaadda ee daahfurnaanta qiimaha, nabadgelyada COVID-19
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • saaciday inay • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Safarka Tareenka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Mareykanka gudahiisa, labada arrimood ee ugu muhiimsan ee dhisaya kalsoonida macaamiisha ee wakaaladaha safarka iyo alaab-qeybiyeyaasha safarka, sida shirkadaha diyaaradaha, 'ma laha qarash qarsoon' iyo 'alaab si buuxda u jajaban ama la soo celin karo'.
Inta badan socdaalayaasha Mareykanka ee kaqeyb qaatay daraasadan waxay sheegeen in warshadaha safarka ay sifiican uqabteen fulinta talaabooyinka COVID-19 ee caafimaadka iyo amaanka.
35% dadka socotada Mareykanka ah waxay soo sheegeen inay hada ku kalsoon yihiin shirkadaha socdaalka inay macluumaadkooda shaqsiyadeed u adeegsadaan sida saxda ah.
Cilmi-baaristu waxay sidoo kale daahfurtay caddeyn muujineysa in kalsoonidu si toos ah u saameyn ku yeelaneyso dhaqanka wax iibsiga.
Sida laga soo xigtay cilmi-baaris madax-bannaan oo cusub, warshadaha safarku waxay kor u qaadi karaan dib-u-soo-kabashada adduunka iyadoo wax laga qabanayo kalsoonida macaamiisha ee daahfurnaanta qiimaha, COVID-19 tallaabooyinka caafimaadka iyo amniga, asturnaanta xogta iyo kalsoonida macluumaadka.
Daraasadda 11,000 oo safar ah oo ku kala baahsan 10 dal, oo ay ku jiraan 1,000 oo ku taal Mareykanka, waxaa sameeyay Edelman Data & Intelligence (DxI), qeybta cilmi baarista iyo falanqaynta ee Edelman, oo daraasad ku sameysay kalsoonida in ka badan 20 sano iyada oo loo marayo Edelman Trust Barometer. Mareykanka gudahiisa, waxay shaaca ka qaaday labada arrimood ee ugu muhiimsan ee dhiska kalsoonida macaamiisha ee wakaaladaha safarka iyo alaab-qeybiyeyaasha safarka, sida shirkadaha diyaaradaha, oo 'aan lahayn qarash qarsoon' (64%) iyo 'alaab si buuxda u jajaban ama la soo celin karo' (55%). Nasiib darrose, inta badan socdaalayaashu hadda waxay u arkaan waxqabadka warshadaha ee labadaas aag inay yihiin kuwo sabool ah (67% iyo 61% siday u kala horreeyaan). Safrayaasha Mareykanka ayaa ka mid ahaa kuwa ugu niyadjabsan adduunka, iyadoo farqi weyn u dhaxeeyo boqolkiiba 31 iyo 16 oo u dhexeeya muhiimadda iyo waxqabadka labadaas dhibic siday u kala horreeyaan.
2. COVID-19 Caafimaadka & Badbaadada
Inta badan (52%) ee socotada Mareykanka ah ee kaqeyb qaatay daraasada waxay sheegeen in warshadaha safarka ay sifiican uqabteen fulinta talaabooyinka COVID-19 ee caafimaadka iyo amaanka. Horey usocodka, si kastaba ha ahaatee, nus nus ayaa sheegay inay jeclaan lahaayeen kalsooni dheeraad ah oo ku saabsan sida adag ee talaabooyinka qaar loo fulinayo, qaasatan, hagaajinta filinka hawada, kala fogaanshaha bulshada iyo raacitaanka safka iyo safka
3. Asturnaanta Xogta
Asturnaanta xogta waxay ahayd arrin kale oo muhiim ah oo ay iftiimisay cilmi baarista. In ka yar afar ka mid ah 10kii safar ee Mareykanka ah (35%, marka loo eego 40% adduunka) waxay soo sheegeen inay hadda ku kalsoon yihiin shirkadaha safarka inay macluumaadkooda shakhsiyeed ugu adeegsadaan sida saxda ah. Adduunweynaha, tani waxay si gaar ah uga dhex muuqatay carruurta Boomers (33%) iyo Gen Z (36%) jawaabeyaasha.
Marka ay timaado adeegsiga macluumaadka si loo shakhsiyeeyo waaya-aragnimada, socdaalayaasha Mareykanka waxay sheegeen inay aad ugu raaxaystaan ​​shirkadaha isticmaalaya xog ay si firfircoon ula wadaageen iyaga oo u maraya wadahadal hal-hal ah (46%), hab dhaqan ballansi hore ah (44%) iyo waxqabadka daacadnimada (44%). Iyagu way ka raaxo yar yihiin, si kastaba ha noqotee, marka macluumaadka si dadban looga soo helo, tusaale ahaan, iyada oo loo marayo waxqabadka warbaahinta bulshada (26%), diiwaanka dadweynaha sida dhibcaha dhibcaha (31%) iyo dukaamaysi hore, raadinta iyo ballansashada shirkadaha kale (35%).
4. Kalsoonida Macluumaadka
Sida laga soo xigtay cilmibaarista, ilaha ugu kalsoonida badan ee laxiriira macluumaadka safarka ee dadka safarka ku ah Mareykanka ay adeegsadaan marka ay baarayaan safarka waa kuwa loo arko inay dano isku mid ah leeyihiin: asxaabta iyo qoyska (73%), oo ah isha xigta ee aadka loogu kalsoon yahay ee bogagga dib u eegista. ku imanaya meel aad uga fog (46%). Taa bedelkeeda, kuwa ugu kalsoonida yar ayaa ah kuwa leh dano gaar ah oo iib ah, sida saameeyayaasha warbaahinta bulshada (23%) iyo dadka caanka ah (19%). Mar labaad, Gen Z waxaa loo muujiyey inuu yahay kan ugu kalsoonida badan ku dhowaad nooc kasta oo adduunka ah.
Sheeko la mid ah ayaa la ciyaaray markii la baarayay kalsoonida noocyada kala duwan ee macluumaadka la xiriira safarka. Qiimeynta macaamiisha (52%) iyo dib u eegista macaamiisha oo qoran (46%) ayaa ka mid ah kuwa loogu kalsoon yahay safarada Mareykanka. Si kastaba ha noqotee, shahaadada dhinac saddexaad (34%), sawirrada alaabada sida qolalka hoteellada ee ay bixiyaan shirkadaha safarka (37%), iyo qiimeynta dhinac saddexaad sida nidaamyada xiddigaha huteelka (39%) ayaa la muujiyay inay yihiin kuwa ugu kalsoonida yar.
Marka lagu daro aqoonsiga nusqaanta aaminaadda, cilmi baarista ayaa sidoo kale daahfurtay caddeyn muujineysa in aaminaaddu ay si toos ah u saameyn ku yeelaneyso dhaqanka wax iibsashada Sababtoo ah COVID-19, ku dhowaad kalabar (49%) ee socdaalayaasha Mareykanka maanta, tusaale ahaan, waxaa la muujiyey inay mudnaanta siiyaan kalsoonida dhammaan arrimaha kale markii la dooranayo alaab-qeybiyaha safarka. Dad badan oo safrayaal ah ayaa sidoo kale sheegay, marka kalsoonidu jirto, waxay ka fiirsan doonaan inay iibsadaan waxyaabo badan oo la xiriira safarka (50%), casriyeynta xirmadooda (40%) iyo iibsashada waxyaabaha aan safarka la xiriirin sida kaararka deynta (29%).